1er jour de reconfinement en photo: nitomby iray ny maty, 309 ny tranga vaovao | NewsMada
Tsy mitsahatra mihanaka ny valanaretina. Namono olona iray indray izany. Mbola voalohany amin’ny hamaroan’ny nifindran’ny Covid-19 ny eto Antananarivo.
Niampy iray indray ny namoy ny ainy noho ny valanaretina Covid-19, araka ny tatitry ny CCO, omaly. Tafakatra 33 izany izao ireo efa nodimandry hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty ary zary lasa misesy isan’andro ny fahafatesan’ olona tato ho ato.
Etsy andaniny, miisa 309 ireo nifindran’ny Coronavirus. Avy eto Analamanga ny 303, mbola loha­laharana raha roa avy ny any Itasy sy any Toamasina ary ny any Menabe.
Niampy 12 ireo marary mafy « forme grave »
Niampy 12 indray kosa ireo marary mafy «forme grave» ka tafakatra 45 izany izao izy ireo. Mbola maro anisa amin’izany ny eto Antananarivo. Miisa 43 izany ka mitsinjara ho 29 ny etsy Befelatanana. Miisa enina eny amin’ny hopitaly manara-penitra Andohata­penaka raha valo kosa eny amin’ny CHU Anosiala. Iray avy ireo marary mafy any Antsirabe sy ny CHU Morafeno Toamasina. Na izany aza, miisa 27 ireo sitrana ka maro anisa amin’izany, miisa 13, ny avy any Toamasina raha 12 kosa ny avy eto Antananarivo. Roa ny avy any amin’ny faritra Anosy. Tafakatra 1 135 izany izao ireo efa nody rehefa nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana.
Efa maherin’ny 3 000 ireo tratran’ny coronavirus
Ankoatra izany, miisa 3 250 ireo tratran’ny Coronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty raha 2 080 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana sy arahi-maso ny fahasalamany.
Tsiahivina fa voka-pitiliana roa andro (4 sy 5 jolay) ny navoakan’ny LA2M ka miisa 39 sy 115 izany tranga vaovao izany. Tafiditra amin’ireo 309 nifindran’ny valanaretina araka ny tatitra, omaly, ihany ireo.